Nomena azy ireo, araka izany, ny toromarika rehetra ilaina mandritra ny fiatrehana ny CAN.
Andro iraisam-pirenena ho an’ny Yoga
Anio no fotoana etsy amin’ny Esplanade Analakely hankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an’ny Yoga. Raha tsiahivina, taranja iray natao hanenana ny rarintsain’olombelona izy io ary iarahan’ny oniversiten’Antananarivo sy ny masoivohon’i Inde mikarakara.
Herivelona maromaro eto amin’ny firenena anio no hifampitaona ery amin’ny villa Elizabeta Ivandry hidinika momba ny fiainam-pirenena. Araka ny fanazavana, fanontaniana lehibe apetraka amin’io fotoana io ny hoe sahaza an’i Madagasikara ve izao toerana misy azy izao ?